Ndị na-emepụta ngwa ngwa - China Agar Suppliers & Factory
Onye na-akọwapụta biya
Nri nri agar
Fujian Global Ocean nri ọkwa agar na-eji Indonesia na ahịhịa ndị China dị ka akụrụngwa, nke bụ ihe okike sitere na mmiri na usoro sayensị. Agar bụ otu ụdị colloids hydrophilic, nke na-enweghị ike ịgbari na mmiri dị jụụ mana ọ ga-agbari n'ụzọ dị mfe na mmiri sie ma jiri nwayọ gbazee na mmiri ọkụ. Fujian Global Ocean nri ọkwa agar nwere ike mepụta gel nkịtị ọbụna ihe ngwọta n'okpuru 1%, yabụ ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa na ụlọ ọrụ nri. Ọ nwere ike ịka mma ...
Fujian Global Ocean ọgwụ agar na-eji Gelidium dị ka akụrụngwa, ewepụtara site na usoro mgbagwoju anya na sayensị, nke dị mkpa iji mepụta ihe ọmụmụ. Fujian Global Ocean ọgwụ ọkwa agar nwere uru na ala gelling okpomọkụ, ezi nghọta, ọ dịghị ọdịda, wdg, .N'oge na ndu cultivation, agar dị ka ezi coagulating gị n'ụlọnga nwere ike nyefee mmiri mmiri bacteriological ajụ n'ime siri ike ma ọ bụ ọkara siri ike bacteriological ajụ. –Bacteriological ịkụ ...
Agar, nke akpọrọ agar-agar, bụ otu ụdị polysaccharide sitere na gracilaria na algae ndị ọzọ na-acha uhie uhie. Ruru ya pụrụ iche jel akpụ na ike e ji mara, ọ na e ọtụtụ-eji nri, ọgwụ, kwa ụbọchị chemical na ndu ụlọ ọrụ. Na ndabere nke nkịtị agar, Fujian Global Ocean Biotechnology Co, .Ltd na-amị ala okpomọkụ ozugbo soluble agar na nkà mmụta sayensị na nkà na ụzụ. Ọ nwere njirimara nke solubility kacha mma na obere okpomọkụ na ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, ọ nwere ike ...